विचरा ! वीरे : RajdhaniDaily.com -
Home सौजन्य विचरा ! वीरे
‘हैन वीरे, के भो तँलाई आज ? निकै सोच्दैछस्,’ झोक्रिरहेको साथीतिर हेर्दै जुँगेले सोध्यो । उसको मनभित्र कुतुहल मच्चिरहेको छ । ठर्राको चोपमा उसका आँखा पनि आधाभन्दा बढी खुल्न सकिरहेका छैनन् । काँचो इँट ङिच्चिरहेको भट्टीभित्रको गन्ध अनौठो छ । भ¥याङमुनिको अँध्यारो चर्पीको दुर्गन्ध बेला–बेला स्वाट्टस्वाट्ट भित्र छिर्दो छ ।
बागबजार गल्लीमा रिमरिम साँझ कोरल्न थालिसक्यो । अन्योलमा अड्केको उसका पाइला टसमस छैनन् । भट्टीको हरियो पर्दा पटक–पटक उघार्दै वीरे मुन्टो मास्तिर बटारिरहेकै छ । तर, पनि मन उकालो लाग्न सकिरहेको छैन, ओरालो सोझिने
दाउमात्र कस्दैछ ।
‘वीरे, ए…वीरे…’ जुँगे ओठमाथि ताउ लाउँदै जोडले बोल्यो ।
‘किन, करा ?’ वीरे हल्का सन्कियो ।
जुँगे चुप लाग्न खोज्छ तर सक्दैन…।
‘तेरै लागि त सोध्दैछु,’ जुँगे साँधेको भटमास चपाउँदै बर्बराउँछ ।
‘खान खा, रक्सी खा, के कराइ’रा ?’ वीरे फेरि हरियो पर्दा उघार्दै भन्छ ।
मन र साँझ एकनास बाक्लिँदैछ ।
‘मान्छेलाई याँ कस्तो भैरा’छ,’ गिलासको धमिलो ठर्रा स्वाट्ट पार्दै वीरे बोल्यो ।
‘के भा’छ ? खुलेर भन त,’ जुँगे पनि के कम ? वीरे केही बोल्दैन । हातको ठर्रा आधा पार्छ ।
‘के भन्ने ?’ वीरे भटमासले मुख मिठ्याउँछ ।
जुँगे धुन्मुनिएको छ । ऊ ओठमाथि चल्मलाउँदै गरेको बाक्लो जुँगा मुसार्न थाल्छ । भट्टीमा पाइलाहरू बाक्लिँदै छन् । भुटनको खार प्लास्टिके कालो सिलिङ रिङ्दैछ ।
‘ओ…हो साउनी, कस्तो खारेको ?’ ग्राहक नाक छोप्दै ‘हाच्छिउँ’ गर्छन् । भट्टी साउनी कालो ताप्के हल्लाउँदै दन्ते हाँसो फाल्छे । काउन्टरमा साउनीको तरुनी छोरी घोप्टो परेर मोबाइलमा व्यस्त छे । सधैं देखिइने भुँडे साउजी आज देखिएको छैन ।
‘ए…वीरे, अर्को लाउँछस् ?’ जुँगे धर्के गिलास देखाउँदै सोध्छ ।
‘मगा न, …सितन पनि,’ वीरे हरियो पर्दाले मुख पुछ्दै भन्छ ।
‘आज तँलाई के भो ? भन् त…,’ जुँगे टाउको ठोक्काउँझैं गरी अघि बढ्छ ।
भट्टी खचाखच भइसक्यो । भुटन र बाराको खार कुहिरीमण्डल बन्दैछ । ठर्राले लिँदैगरेका आँखाहरू टेबलमाथिको सितन बटार्दैछन् । हाँसोहरू आपसमा ठोक्किरहेका छन् ।
‘मलाई भननन…हुन थाल्यो बुझिस्,’ वीरे बोल्यो ।
‘के भो, रिंगटा छुट्यो ?’ जुँगे मुसुमुसु हाँस्दै सोध्छ ।
‘जिस्किरा ? खालास् है, आफूलाई याँ कस्तो भा’ह ?’ वीरे गाँठी कुरो खोल्न सकिरहेकै छैन ।
‘…अनि के कुरा चपाइ’रा त ?’ जुँगे चुस्की लाउँदै भन्छ ।
‘कोठाँ जाने मनै छैन भन्या, कोठा सम्¤यो कि भननन…भ’रा आउँछ,’ वीरे बल्ल खुल्न थालेझैं देखियो ।
‘किन, त्यस्तो के भ’र ? भाउजुसँग ठाकठुक प’रो ?’ जुँगे चाख मानेर सोध्छ ।
वीरेको अनुहार भने निचोरिएको कागतीझैं भएको छ । रन्थनिएको आफ्नो मथिंगल उसलाई धूमिल लाग्न थाल्यो । ऊभित्र कुुनै कुराको छेकछन्द घुस्न सकिरहेकै छैन ।
‘ओ…हो, झमक्कै भइसकेछ, दिन छोटो भइसकेछ,’ वीरे हरियो पर्दा उघा¥यो । उसका नजर फेरि मास्तिरै तेर्सिन्छन् ।
‘तैले अघिदेखि मास्तिरमात्रै के हेरि’रा ?’ जुँगे अचम्म मान्छ ।
‘तँलाई थाहा छैन, मेरो कोठा †’ वीरे हल्का सन्कियो ।
‘थुक्क, रक्सीको सूरमा मैले नि बिर्सेछु,’ जुँगेले आफ्नो हाँसो रोक्न सकेन ।
साउनीकी छोरी बेलाबेला पुलुकपुलुक हेर्छे । भट्टी चाट्नेहरूको चहलपहल उस्तै छ । गिसालहरू ठर्राले भरिएका छन् । बाहिर भुङ्ग्रोमा सेकुवा पल्टाउँदै गरेको केटो घरि भित्र, घरि बाहिर गर्नमै ठिक्क छ । ऊमाथि ‘फुच्चे’को नारा लगाउने ग्राहक झिरमा उनेको सेकुवा फलाकिरहेका छन् ।
‘हस्, ल्याइहाल्छु,’ केटो घाँटी फुलाउँदै आगो कोइला फुक्न थाल्छ ।
आगो बल्न सकिरहेको छैन । मसालाका गन्ध मिसिएको धुवाँ नाकहरू चहारिरहेको छ ।
‘अँ…तँलाई कोठा जाने मन किन भैरहेको छैन रे ?’ जुँगे कसोकसो वीरेमाथि कोल्टियो ।
‘………..’ वीरे बोल्न आवश्यक ठान्दैन । बरु, ठर्रा निल्छ ।
‘ठूलै झगडा परो कि कसो ?’ पिलेटमा बचेको गेंडो भटमास टिप्दै जुँगे बोल्यो ।
‘तँलाई भनेर के फाइदा ? हल्लै बढी गर्छस्,’ वीरेलाई झनक्क रिस उठ्यो ।
जुँगे फेरि चुपचाप । एकपटक ‘भट्टी गफ’का क्रममा वीरेले जुँगेलाई कसिलो मुक्का हानेको थियो । जुँगे त्यही सम्झ्यो । वीरे रिसाएपछि ऊ शान्त भयो ।
‘तँ पनि झनक्क रिसाउँछस् के,’ जुँगे सुस्त बोल्छ ।
‘खै सितन भन्या ?’ रित्तो पिलेट देखाउँदै वीरे जुँगेतिर हेर्छ ।
‘ए…साउनी, खै हाम्रो ?’ जुँगे चिच्यायो ।
‘ए…मैले ट भुसुक्कै बिर्सेको, …एकैछिन है…,’ साउनी दंग पर्छे ।
‘खान पनि के खानु ? मनै छैन,’ अघिल्तिरको बारा रोटी देखेर वीरे दिक्क मान्छ ।
‘त्यसो भए रउसी खान त,’ जुँगे बारा टोक्दै भन्छ ।
‘बरु, तै ठीक छ, खै साउनी अर्को…,’ वीरे हत्केला उठाउँदै ठर्रा माग्छ ।
साउनीकी तरुनी छोरी मैलो जर्किनभित्रको ‘ठर्रा’ गिलासभरि खन्याएर काउन्टरमा लुसुक्क छिर्छे ।
‘यो नानी पनि हेर्दाहेर्दै तरुनी भई है †?’ जुँगेले भन्यो ।
‘के भनिस् ?’ वीरेको आवाज अनायास उचालिन्छ ।
कृत्रिम हाँसो उमार्दै जुँगे मूर्ति बन्छ ।
‘तँ नि खाए’सि मनपरी बोल्छस् के,’ वीरे सन्किन थाल्यो ।
‘भइहाल्यो नि त,’ जुँगे नम्र हुन खोज्छ ।
भट्टीको चहलपहल विस्तारै मत्थर हुँदैछ । साउनीकी छोरी माथिल्लो चोटा उक्लिसकेकी छे । बाहिर सेकुवा पड्काउने केटो सामान थन्क्याउने मेसोमा देखिन्छ । जुँगे पनि आफ्नो कोठातिर हिँडिसकेको छ । भट्टी साउनी कन्तुर खोतल्दैछे । वीरे लुसुक्क बाहिरिन्छ ।
आज बिहानै गाउँबाट सहरको कोठा आइपुगेकी जेठी श्रीमतीको ठुस्स अनुहार सम्झिँदै वीरे कान्छी बुढीको ‘घुर्की’ बुन्न थाल्छ, सुनसान सडकबीच तिर्मिराइरहेका तारासँगै लम्पसार परेर ।
राजनीति Dhruba Lamsal - May 26, 2020 0